Manaova ny Marina Foana
TORO LALAN’NY BAIBOLY: ‘Iza no hivahiny ao [an-tranolain’Andriamanitra]? Izay mandeha tsy misy tsiny sy manao ny marina ary milaza ny marina ao am-pony.’—Salamo 15:1, 2.
MAHASOA VE IZANY? Miaiky ny ankamaroan’ny olona hoe tsara ny manao ny marina. Ahoana anefa raha misy fakam-panahy? Ohatra hoe hahazo vola be ianao raha manao ny tsy marina, sady tsy ho tratra mihitsy. Eo no ahitana hoe manao ahoana ny toetranao.
I Raquel, ohatra, mpividy entana ho an’ny orinasa iasany. Hoy izy: “Nilaza tamiko ny mpivarotra sasany fa raha mividy entana ao amin-dry zareo aho dia homeny vola, mba ho solon’ny ‘fihenam-bidy’ tokony ho an’ny orinasanay, hono. Tsy nety anefa aho satria tadidiko ilay torohevitry ny Baiboly hoe zava-dehibe ny manao ny marina. Henon’ny mpampiasanay izany, ka vao mainka izy natoky ahy.”
Marina aloha fa mety ho nahazo tombony i Raquel raha nandray an’ilay vola. Ahoana anefa raha tratran’ny mpampiasany izy avy eo? Tsy ho voaroaka tamin’ny asany ve izy? Dia ho mora aminy ve ny hahita asa hafa aorian’izay? Ary hilamina ve ny sainy? Izany no tena zava-dehibe amin’i Raquel, satria te hanana feon’ny fieritreretana madio foana izy. Milaza ny Ohabolana 22:1 hoe: “Aleo laza tsara toy izay harem-be, ary aleo mahazo sitraka toy izay mahazo volafotsy sy volamena.”
Malaza ho mpiasa manao ny marina i Jessie
I Jessie koa tena tian’ny mpampiasa azy, satria manao ny marina sy azo itokisana. Nahazo fisondrotana àry izy, sady lasa malalaka kokoa ny fandaharam-potoanany. Afaka miaraka kokoa amin’ny vady aman-janany izy izao, ary betsaka kokoa ny fotoana anompoany an’Andriamanitra.
Mpampiasa maro no mitady olona azo antoka hoe manao ny marina, rehefa hampiditra mpiasa. Nanoratra tany amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Philippines, ohatra, ny talen’ny orinasa iray, ka nangataka Vavolombelona mba hanao fangatahana hiasa ao aminy. Nilaza mantsy izy fa “mazoto miasa sy manao ny marina ary mafana fo” izy ireo. I Jehovah Andriamanitra irery ihany anefa no mendrika hoderaina noho izany, satria izy no nampianatra antsika mba ‘hankahala ny ratsy’ sy ho ‘tia ny tsara.’—Amosa 5:15.
Hizara Hizara Manaova ny Marina Foana